Gaas oo daahfuray mashruuc lagu dhisayo garoonka Boosaaso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Boosaaso – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas ayaa manta daahfuray amshruuc lagu balaarinayo garoonka diyaaradaha Boosaaso.
Munaasabadaa ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan saddexda gole ee Puntland, saraakil ka socday hay’adda qanadarasyada u qaabilsan Talyaaniga ‘’UNOPS’’, waxgarad, maamulka gobolka Bari, culimo’udiin, saraakil katirsan madaxtooyada Puntland iyo marti sharaf kale .
Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo Khudbad dheer ka jeediyay Madasha ayaa sheegay in marka la dhamaystiro dhismaha garoonka diyaaradaha Bosaso uu noqonayo garoon ay leeyihiin Soomaali oo idil.
‘’Waxanu siinay mashruucaan Shirkad laga leeyahay wadanka Shiinaha oo lagu magacaabo China Civil Engineering Constraction Corporation (CCECC),waa kambani aad u weyn,waana kambanigii dhisay jidka xadiidka ah ee u dhaxeeya Tansaaniya iyo Saambiya ‘’Sidaasi waxaa yiri madaxwaynaha Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
‘’Sababta aanu u dooranay waxay ahayd lacagta loogu talagalay Garoonka Cida ugu dhow ee sheegatay ayuu Kambanigu ahaa,Dowlada iyo shacabka Puntland lacag yar ayaa kaga soo aadaysa oo mashruuca lagu kaabayo’’ ayuu Markale Yiri Madaxwayne Cabdiwali Gaas.
‘’Masuuliyiinta kambaniga ninka ugu sareeyana waxa uu ii sheegay in ujeedkoodu yahay sidii ay Puntland u imaan lahaayen anagana jecel in ay noo yimaadan,oo dalka yimaadan isalamarkaana ay maalgashadan lagana shaqeeyo nabadgalyadoo’’ ayuu hadalkiisa raciyay Madaxaynaha Puntland Cabdiwali Gaas .
Gaas ayaa sidookale sheegay in lagu dhamaynayo dhisamaha garoonka diyaaradaha Bosaso muddo dhan 10-bilood ilaa halsano, waxana xigi doona garoomada diyaaradeed ee magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo.
‘’Sanad kabacdi Garoon Diyaaradeed oo Caalami ah wuu ka hirgalidoona Magaalada Boosaaso’’ ayuu Khudbadiisa ku soo xiray madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Markii ay xafladdaasi soo gaba gabowday, wuxuu Madaxweynaha Puntland booqday Hotelka Gacayte oo ah kii ugu horreeyey ee magaalada Boosaaso laga furo balse bilihii u dambeeyey dayactir ballaaran lagu wadey, dhowaanna si rasmi ah xarigga looga jiri doono.
Qarax lala beegsaday ciidamada Jabuuti ee Buulo Barde